त्रिशालाले जुत्ता देखाएकी हुन् त ? – Mero Film
त्रिशालाले जुत्ता देखाएकी हुन् त ?
२०७५ भदौ ११ गते १४:१६
गायिकाहरुमा त्रिशाला गुरुङको फ्यान क्रेज धेरै छ । कभर गीत धेरै गाएर त्रिशालाले फ्यान कमाएकी छिन् । उनले, गीत गाउँछिन् पनि, मोडलिङ पनि गर्छिन् । अरु त अरु उनका आकर्षक तस्बिर म्यागेजिनका कभर फोटो पनि बनेका छन् । त्रिशालालाई नेपाली फिल्मका निर्माताले अभिनेत्री बनाउन प्रयास पनि गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म उनले फिल्म खेलेकी छैनन् ।
उनै त्रिशालाले आफ्नो इन्स्ट्राग्राममा दैनिक फोटो पोष्ट गर्छिन् । उनकै फोटो हेरेर पनि उनका फ्यान डेढ लाख पुगेका होलान् । त्रिशालाले नयाँ जुत्ता किनेपछि तस्बिर पोष्ट गरिन् । उनले नयाँ जुत्ता कस्तो लाग्यो भन्दै तस्बिर पोष्ट गर्दा कपडा भने सम्हाल्न सकिनन् । हुनत, उनले जुत्ताको बहाना पारेर यस्तो तस्बिर खिचाएकी पनि होलिन् । तर, उनले सामाजिक संजालमा जुत्ता देखाउँदै पोष्ट गरेको तस्बिरमा अन्डरवेयर पनि देखिएको छ ।
त्रिशालाले विकिनीमा फोटोसुट पनि गरिसकेको हुनाले उनका लागि यो सामान्य होला । तर, बस्न नजानेर वा जानी जानी उनी वार्डरोव मालफक्शनको शिकार भने भएकी छिन् । त्रिशालाले जुत्ताको बहाना पारेर तस्बिर खिचाएकी पनि हुनसक्विछन् । तर, उनले बस्न नजान्दा यस्तो भएको हो भन्न सकिन्छ । हट सुटमा रमाउने त्रिशालाको यो तस्बिरले भने उनलाई नै धोका दिएको छ ।
तर, उनले पत्तो पाएकी भने छैनन् होला नत्र उक्त फोटो क्याप्सन चेन्ज हुन्थ्यो होला है ?